Qaadashada farshaxanka Galbeedka iyo dibedda
Waxan sameeyey waa Galbeedka Dhaqdhaqaaqa Dhexdhexaadinta ee magaalada ee Minneapolis Dhaqanka Degmada. Mashruucu wuxuu soo bandhigayaa hal-abuurnimo laga bilaabo Minnesota oo dhan iyada oo si ku-meel-gaar ah loo buuxiyo dukaamada bilaashka ah ama goobo ganacsi oo leh shaqada farshaxanada Minnesota. Waa dadaalka ugu weyn ee noociisa ah ee waddanka marti gelinaya 38 abuurnimo oo kudhisan 16 xaafad.
Guddiga La-talinta La-qabsashada Farshaxanka waa koox muhiima oo ah 17 farshaxan oo farshaxanno iyo xirfadlayaal farshaxan kuwaas oo khabiir ku ah xirfadaha bulshada iyo farshaxanka. Gudigani wuxuu kaa caawinayaa sidii loo hubin lahaa in Made Here dadaalka daaqada daaqada ay tahay mid soo dhaweyneysa, la heli karo oo ka tarjumi kara kala duwanaansho la'aanta Minnesota. Guddiga ayaa dejiyey hadaf gaaraya 35% farshaxanayaal ka soo jeeda beelaha midabada si ay u noqdaan kuwa loo yaqaan 'Made Here' ee farshaxanayaasha ka qayb galayaasha ee 2014 iyo ka badiyay goolkaa 5%. Tani waxay si toos ah u socotaa iyada oo la adeegsanayo hannaanka codsiyada ee la heli karo iyo isbedbeddelaya ayaa soo bandhigay fursado badan oo loogu talagalay dadka fannaaniinta soo koraya ee gobolka oo dhan oo codkooda u dhiibay farshaxanno ka soo jeeda beelaha aan la aqoon.
Kama socon kartid ama socon kari wayday 33-boqolkii qaybood ee Bloomington Avenue iyaga oo aan si joogta ah u arkeynin xanuunka Andrew-ga maalin walba-aad ku shaqayso; Sidaad u socotay eeyga, waxay ahayd wajigaaga oo aanad iska indho-tirin.
Mid ka mid ah farshaxan oo kale, Andrew Moore, wuxuu qeexayaa inuu yahay "farshaxan dhab ah." Wuxuu ku qaatay 18 sano oo abuuray farshaxanno, jinsi-ku-takoor lagu soo bandhigay qalab sawirro waaweyn oo laga helay alaabta laga helay xayawaanka hore ee koonfurta Minneapolis ee Powderhorn. Shaqadiisu waxay ahayd in lagu dhiirigeliyo wada hadalka khilaafka ah ee ku saabsan cunsuriyadda, gumeysiga, iyo nidaamka xabsiga, musuqmaasuqa badanaa wuxuu ka tirtiraa tirakoobka bilowga ah iyo bixinta cabsida aadka ah ee lagu rinjebiyo musqulaha, sanduuqyada la tuuro, sariiro, iyo daaqadaha daaqadaha. Andrew wuxuu inta badan sheegayaa, "Shaqadaydu maaha kuwo qurxoon, si loo eego, looma malaynayo inay qurux badan tahay in la eego." Ma gaari kartid ama socon kari wayday 33-boqol oo qaybood oo Bloomington Avenue ah iyada oo aanan ku dhicin xannuunka Andrew maalin kasta-ku wadidaada baabuurkaaga; Sidaad u socotay eeyga, waxay ahayd wajigaaga oo aanad iska indho-tirin.
Andrew wuxuu helay fursada ah inuu abuuro goob gaar ah oo ku rakibo qalabka loo yaqaan 'Made Here Show Intuitive Artist Showcase', oo ka mid ah sawirada ku yaala Degmada Warehouse. Waxa uu ahaa fanka fanka leh oo ka shaqeeya laba qaybood oo dadweyne ah oo ku hadlaayay halkaas oo uu wadaagay shaqadiisii isagoo la socday dhagaystayaal taageerayaal ah. Iyada oo halkan lagu sameeyey, Andrew wuxuu awood u siiyey hay'adda in ay sii wadaan wadaagista sheekadiisa iyada oo loo marayo dhaqanokiisa hal abuurka bulshada.